Amaqhinga ama-5 amahle we-SEO Abaculi Abadonsa Kanzima Abangawasebenzisa | Martech Zone
Ngakho-ke ungumculi ofuna ukwenza isitatimende online futhi ucabanga ngokwenza amasu we-search engine optimization (SEO) akusebenzele? Uma kunjalo, yaziswa ukuthi, ngenkathi ingekho inhlamvu yomlingo ekusetshenzisweni kwenjini yokusesha, futhi akunzima ukuthuthukisa ukubonakala kosesho lwakho ngaphakathi kweGoogle neBing.
Nazi izindlela ezinhlanu ezisebenzayo ze-SEO zabaculi zokuthuthukisa ukubonakala kwenjini yokusesha.
Ukubhuloga kuyindlela enhle yokuqashelwa yizinjini zokusesha. Vele uqiniseke ukuthi iwebhusayithi yakho ibhaliswe nezinjini ezinkulu (iGoogle, Yahoo!, NeBing) ukuze bazi ukukhasa ezungeze isiza sakho futhi bakhombe okuthumele.
Uma ubhuloga, qiniseka ukusebenzisa okuqukethwe okunamagama angukhiye (leyo nje i-buzzphrase esho ukuthi “sebenzisa amagama angukhiye njalo kokuqukethwe kwakho”). Isibonelo, uma ubhuloga nge-bass clarinet, kungcono ukusebenzisa ibinzana elithi “bass clarinet” kusihloko nezikhathi ezimbalwa kokuqukethwe.
2. Sebenzisa ubuqambi be-Google
Uma ubhuloga (futhi kufanele ube, bheka ngenhla) mayelana nezihloko eziphathelene nomculo (insimbi yakho, izingoma zakho ezinkulu, amabhendi amasha noma anethonya, abaqambi abakhulu, njll.), Ngakho-ke ungumbhali. Kepha udinga ukudlulela ngalé kokuba ngumbhali futhi ube yi Umbhali weGoogle.
Ukwenza lokho kwenzeke, okokuqala udinga i-akhawunti ye-Google + (kuphephile ukusho ukuthi ukuba ne-akhawunti ye-Google + kuzokusiza ne-SEO futhi, ngoba i-Google + kusobala ukuthi iwumkhiqizo wakwaGoogle). Kwiphrofayela ye-akhawunti yakho ye-Google +, uzobona isigaba esithi “Umnikeli ku” ngaphansi kwe- “Links.” Qiniseka ukuthi ugcwalisa ama-URL namagama amawebhusayithi lapho ubhala khona (qiniseka ukufaka ibhulogi yakho).
Futhi, noma nini lapho ubhala i-athikili, qiniseka ukuthi kukhona umaki wokuxhumanisa kunhlokweni wokuthunyelwe okhuluma nge-akhawunti yakho ye-Google +. Ngokusobala, uzongena esikhundleni se- "Google + ID" nge-ID yakho yangempela.
I-3. Yenza ngcono izithombe zakho
Amathuba amahle kakhulu ukuthi okuqukethwe kwakho kuzofaka nezithombe. Uma kunjalo, lapho-ke noma nini lapho ushumeka isithombe kokuqukethwe kwakho, kufanele ufake incazelo yesithombe kuzimpawu ze- “alt”. Nakhu ukuthi "utshela" kanjani izinjini zokucinga ukuthi yini esemfanekisweni; abahlakaniphile ngokwanele ukuthola zonke izithombe ngokuqukethwe okwenziwe ngamaphikseli. Zizwe ukhululekile ukusebenzisa amagama akho abalulekile kule ncazelo futhi.
4. Sebenzisa i-Youtube
Ufuna ukuqashelwa kwezinye izindawo ngaphandle kwebhulogi yakho, akunjalo? Ukwenza lokho kwenzeke, uzodinga ukukhiqiza okuqukethwe kwezinye izindawo ngaphandle kwebhulogi yakho. I-Youtube iyindawo enhle yokushicilela okuqukethwe kwevidiyo, ikakhulukazi uma ufuna ukukhombisa amakhono akho wokuhlanya entweni ethile.
Ngaphezu kwalokho, ungashumeka amavidiyo wakho we-Youtube ngqo kubhulogi yakho. Lokhu kungathuthukisa okuqukethwe kwakho kwebhulogi (nayi ifayili le- isibonelo esihle). Qiniseka ukumaka ividiyo ngalawo magama abalulekile ebesikhuluma ngawo, futhi.
5. Sebenzisa i-Google Analytics
I-Google Analytics iyindlela enhle yokulandela ukusebenza (noma ukungasebenzi kahle) kwamasu akho wokusebenzisa. Qiniseka ukuthi ibhulogi yakho ibhaliswe ne-Google Analytics. Yivakashele njalo ubone ukuthi yini ehambisa ithrafikhi kusayithi lakho. Umthetho olula lapha uthi: noma yini esebenzayo, yenza okuningi ngayo nanoma yini engasebenzi, yeka ukukwenza. Kulula, akunjalo?
Tags: umculi seoukusebenzisa ngokugcwele injiniseo
Kusetshenziswa Imidiya Yezokuxhumana Ukukhiqiza Okuhola
Okunhlobonhlobo kokuqukethwe nemiphumela yeDrayivu